सुगतरत्नमाथि किन कारवाही हुन्न ?
आलुप्याज किनेजसरी जहाज किन्न पाउनुपर्छ भन्थे सुगत रत्न कंसाकार । २ थान वाइडबडी जहाज आएपछि नेपाल एयरलाइन्सले प्रगति गर्छ भनेर ग्यारेण्टी गर्ने यिनै हुन् । जहाज आयो, अव २९ अर्व सरकारले दिएपछि आत्मनिर्भर हुन्छ भन्न थालेका छन् ।
लालपूर्जाबिनाको जहाज खरिद गरेको भनिदैछ । अनेक प्रमाणहरु सार्वजनिक भएका छन् । महालेखाले प्रश्न गरेको छ, तैपनि सरकार र प्रतिपक्ष बोल्दैन, अख्तियार आँखा चिम्लेर बसेको छ ।
यो जहाज खरिद प्रकरणमा ६ खर्ब कमिशन खाएको आरोप छ । कसकसले खाए ६ अर्ब ? राष्ट्रमाथि यति ठूलो घात हुँदा प्रतिपक्ष मौन बस्छ भने दालमा कुछ कालो छ । छ । अव निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या र यो जहाज खरिद प्रकरण उस्तै उस्तै रहस्यमय मानिदैछ ।
पहिले लाउडा, चेज, साउथ चाइना, चाइनिज जहाज अव एयरवसको न्यारो र वाइडबडी काण्ड । मदन खरेललाई सरकारले किन एकाएक खटायो र स्वेतपत्र जारी गर्ने अवस्थामा पुर्‍यायो । के नेपाल एयरलाइन्सलाई निजीकरण गर्ने साजिस त भइरहेको छैन ?
सुगत रत्न कंसाकार न्यारोबडी भ्रष्टाचार काण्डमा जेल पुगेका थिए । तिनैलाई नेपाल एयरमा नियुक्त गरेर ६ खर्बको भ्रष्टाचार काण्ड गराइयो । सबै ठूला दलले भाग पाए, सबै चुप ।
वाइड र न्यारो बडी जहाज आयो । कम्पनीले होइन, दलालले बेचेछ । बेच्ने कम्पनी बेच्नकै लागि खडा गरियो र बेचेपछि खारेज भइसक्यो । विमासमेत छैन, बिल र मितिसमेत हातले लेखिएको छ, यस्तो लालपूर्जा देखेर नेपाल सरकार कति कच्चा काम गर्छ भन्ने प्रष्ट भयो ।
जहाज खरिद गरियो, जहाजको आधिकारिक कागज नेपालसँग छैन । छ भने बिल अफ सेलमात्र छ । बिल जहाजको लालपूर्जा होइन । लालपूर्जा किन्नेको नाममा सर्दै गएजस्तै हो जहाजको लालपूर्जा जुन नेपालसँग छैन । कहाँ छ, सुगतरत्न भन्दैनन् । भन्न सक्दैनन् ।
सुगत रत्न कंसाकारले स्वयं भनेका छन्, ‘२५ अर्बका सामान बिना स्वामित्व किन्ने मूर्ख होइन म ।’ एयरलाइन्सका अधिकारीहरू प्रश्न गर्छन्, ‘एयरबसले दिएको आधिकारिक कागज खोइ त ? हाई फ्लाईले त्यो नदिएर किन उतै राख्यो ? जहाज बेचेकै हो भने उसलाई अब त्यो कागजको के जरुरत ? ’
सम्झौताको कागजलाई ‘लालपुर्जा’ भनिएको छ । यो सम्झौता गर्ने कम्पनी जहाज बेचेर बन्द भइसक्यो । एयरबसको आधिकारिक कागजात नेपालले नपाउनु नै भ्रष्टाचार भएको प्रमाण हो ।
विश्वका जहाजबारे तथ्य राख्ने प्लेन्सपोर्टर्स डट नेटमा नेपालमा आएका दुई जहाजका विवरणमा हाई फ्लाई एक्सले भाडामा दिएको लेखिएको छ । के हामी भाडामा जहाज चलाइरहेका छौं ।
स्रोतका अनुसार नेपाल एयरलाइन्सको जहाज खरिद सम्झौता हाई फ्लाई एक्स आयरल्यान्डसँग भएको छ । यो जहाज खरिद काण्डमा नेपाल एयरलाइन्सको सिंगो सञ्चालक समिति पनि जिम्मेवार छ ।
वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणबारे अख्तियारले कागजातको अध्ययन गरिरहेको छ । यो अध्ययनमा किन ढिलाइभइरहेको छ ? कतै राजनीतिक दबाबका कारणले अख्तियारले छानबिनमा ढिलाइ गरेको त होइन ? त्यसै पनि अख्तियारका केही आयुक्त भ्रष्टाचारमा बदनाम हुन थालेका छन् भने केही राजनीतिक प्रभावमा काम गरिरहेका छन् । भर्खर नियुक्त भएका प्रमुख आयुक्तका भनाइहरु पनि बिबादास्पद मानिएका छन् । यसकारण यी दुई जहाज खरिद काण्ड उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन गर्नुपर्ने विषय बनेका छन् ।
यति भइसक्दा पनि प्रमुख पतिपक्षीले मुखमा ताल्चा ठोकेर बस्नु र सरकारले यसबारेमा मौनता साध्नुले समेत भ्रष्टाचार गनाएको छ । सुशासन र समृद्धिको सपना देखेर सपना साकार पार्न दौडेका प्रधानमन्त्री केपी ओली यो भ्रष्टाचार काण्डले नराम्ररी बदनाम हुनपुगेका छन् । ओली सपना देख्नसक्छन्, सपना पूरा गर्न स्वच्छ छवि देखाउन सक्दैनन् भन्ने अन्जान शाक्यलाई राजदूत नियुक्त गरेर परिवारवाद हावी हुन दिएबाट पनि प्रष्ट भएको छ । केपी ओलीलाई सपना देख्न दिने, सपना साकार पार्न नदिएर पङ्गु बनाउन ओलीको बिरोधीहरु कम्मर कसेर लागेको देखिदैछ । नाकावन्दीमा देशभक्त देखिएका ओली प्रधानमन्त्री भएपछि अधिनायक र भ्रष्टाचारका प्रमुख संरक्षकका रुपमा देखिनु दुर्भाग्य हो ।